MACLUUMAADKA TARANKA NOOLAHA EE BULLBOXER PIT DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Feeryahan / Ereyga Mareykanka ee loo yaqaan 'Bull Bull Terrier' isku dhafka ah eeyaha
Tani waa Leo the Bullboxer Pit at 4 sano. Aabihiis wuxuu ahaa Pull Bull, hooyadiisna waxay ahayd Feeryahan. Leo wuxuu ahaa qashin qubka. Leo wuxuu umuuqdaa iskudhaf Spencer Pull Bull oo leh Bruno Feeryahanka , yaa labadaba eeyo lab ah oo dhexdhexaad ah , laakiin si mala awaal ah u hadlaya. :)
Godka Bullboxer ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Feedhyahan iyo Godka Dibida Maraykanka . Habka ugu fiican ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah in la eego dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta oo ka mid ah noocyada isku-dhafan. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Godka Bullboxer
Diiwaan Geliyaha Nashqadeeyaha = Bullboxer Mareykan ah
Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynka Naadiga = Feeryahan Dibi Mareykan ah
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Bullboxer
'Tani waa Jaxson oo da' yar ka weyn. Aabihiis wuxuu ahaa brindle purebred Feer hooyadiisna waxay ahayd a fawn purebred Pit Bull . Wuxuu la wareegay astaamihii hooyadiis inta badan. Isagu waa eey weyn , oo weyn leh carruurta . '
'Raj iyo Danielle waa milkiileyaasha hanka leh ee Marco, Pit / Boxer / wax kasta oo kale oo isku jira. Waa 11 bilood jir (ugu dhakhsaha badan wuxuu noqon doonaa 1) wuxuuna ku raaxaystaa calaliinta, ulaha hilibka, socod dheer oo xeebta ah (macno ahaan) guud ahaanna wuxuu qof walba siiyaa jacayl. '
Pharoah the Bullboxer Pit at 1 1/2 sano jir— Pharoah way jeceshahay biyaha. Markii hore wuu yara xishooday, laakiin markii uu i bartay wuu igu soo wareegay. Wuxuu leeyahay nacayb sare eeyo kale laga bilaabo in lagu weeraro da 'yar, laakiin isagu waa eey wanaagsan oo hareeraha ka jira.'
Riley the Bullboxer Pit at 2 sano jir
Daisy Duke, Godka Bullboxer ee 2 sano jir— Hooyadeed waxay ahayd Feedhyahan aabaheedna wuxuu ahaa Godka Dibida Maraykanka . '
Kabo cad Bullboxer Pit cad sida eey yar oo 4 bilood jir ah xagga dambe ee gaari xamuul ah oo laga soo qaado - 'Kabo aabihiis waa Feeryahan hooyadiisna waa Bull Bull. Isagu waa nin firfircoon oo firfircoon oo si joogto ah hooyadiis u sasabaya inuu la ciyaaro. Wuxuu jecel yahay daaweyntiisa wuxuuna bilaabayaa inuu si dhakhso leh u barto amarrada aasaasiga ah. Markay maalintu dhammaato oo ay tahay waqtigii loogu yeeri lahaa habeenka isagaa ah kan ugu horreeya ee ku soo kici kara oo wuxuu u jeedaa inuu riyoodo (waxay u badan tahay inuu hooyadiis ku eryanayo daaradda) daqiiqado gudahood. Wuxuu wax weyn ku soo kordhiyay qoyska, kana duwan waalidkiis markii ay da'diisa ahaayeen wuxuu ku weynaa inaanu cunin waxyaalo aan ka ahayn waxyaabaha uu ku ciyaaro. Waxaan kaliya u waayey hal koofiyad ciyaalkiisa, taas oo sifiican ugafiican kabaha, xadhkaha, koofiyadaha aan la tirin karin ee waalidkiis baabiiyeen markii ay 4 bilood jireen. Waxaan rajeynayaa inaan daawado isaga oo koraya oo aan isku beddelayo waxaan hubaa inuu noqon doono eeyga ugu caansan uguna qurxoon dhismaha. '
Kabo cad cad, oo sanka casaanka Bullboxer ah sida eey yar oo 4 bilood jir ah oo fidsan
madow iyo caddaan yar oo adhijir ah australia
Kabo cad Bullboxer Pit cad sida eey ee 4 bilood jir hurdo
Qaddar Godka Bullboxer sida qof weyn - 'Aakhiro waa isku darka Gubashada / Feerka. Iyadu waa eey weyn. Iyadu waa qof aad u jecel oo leh astaamo ka badan Bull Bull badan Boxer. Waxay leedahay bushimaha feedhka iyo daanka hoose oo waxoogaa yar ka dheer kan kore. '
Aakhiro Godka Bullboxer weli si buuxda uma koraan
Aakhiro Godka Bullboxer sida eey
Qaddar godka Bullboxer sida eey jiifta cawska.
Kismet the Bullboxer Pit at 1 sano iyo 7 bilood jir diyaar u ah inuu ciyaaro - 'Kismet (Kiz) waxaa i siiyay qof aan garanayn markay da' yar uun jirtay. Iyadu waa eeyga ugu jacaylka badan ee aan abid la kulmo! Waxay jeceshahay inay siiso dhunkasho iyo inay noqoto xarunta dareenka. Waxay jeceshahay dhallaanka iyo xayawaannada kale (xitaa doofaarkayga ku meel gaarka ah) waxay ku raaxeysataa cayrsashada dab-damiska iyo isku-uruurinta gacmaheyga si aan u seexdo. Iyadu waa cunug wanaagsan oo u dhoola caddeynaysa qof kasta oo ay la kulanto.
Sam Bullboxer Pit (Pit Bull / Feer isku dhafka eyga)
Gantaal Bullboxer Pit (American Pit Bull / Boxer mix) markuu jiro 2 sano— Waa nin eey firfircoon oo sarreysa. Isagu waa mid dhakhso badan, markaa magiciisa. Gantaalku waa bartaha dhaqsaha badan. Wuxuu bartay tabaha badan oo ay ku jiraan shan sare, ruxruxo, fadhiiso oo jiifo kaliya 4 bilood jir. Gantaalku wuxuu jecel yahay inuu wax barto! Wuxuu jecel yahay Lafaha Hilibka. Isagu waa eey jecel sida Feeryahan laakiin sidoo kale xoog iyo muruqba leh sida Baqorka Mareykanka. Waxaan ka badbaadiyey gantaal dadkii quudinayey hilib cayriin oo ay haraatiyeen markii uu jiray bil. Waa eeygii ugu fiicnaa ee abid soo mara. '
Rocket the Bullboxer Pit (American Pit Bull / Boxer mix) eey yar oo jirta 5 bilood
'Tani waa Walter Mellin (heshaa) seddex bilood. Hooyadiis waxay ahayd Bull Pull aabihiisna Feedhyahan. Aad buu u macaan yahay hurdo badana wuu qabaa. Isagu waa fuul! Isaguba caqli badanyahay. Wuxuu durba ogyahay fadhiista, joogida, jiifka, kaalay halkan, magiciisa, tag dheriga, iyo sidoo kale ereyo kale oo kala duwan oo tilmaamaya halka loo socdo (sanduuqa, qolka jiifka, banaanka). Isagu waa nin jilicsan oo wuxuu ku weerari karaa buufin si ciyaaro leh 35 daqiiqo ka hor inta uusan soo bixin ... ciddiyaha, ee uusan ahayn ilkihiisa! Qof kastaa wuu jecel yahay wuuna beddelayaa dabeecadaha qof walba ee ku saabsan eeyaha nooca Pit Bull (ama isku darka Pit Bull).
Kani waa Toddoba, hooyadeed waa Ameeriko Pit Bull Terrier aabbeheedna waa Feeryahan. Toddoba wali waa ey ey ku jiraan sawirkan.
'Sawiradaan waxaa la qaaday markii toddobo jir uu jiray siddeed bilood. Waxay ahayd qiyaastii 47 rodol (22 kg). Waa inay ugu sarreysaa qiyaastii 60-70 rodol (27-32 kg), oo laga yaabo inaan la gaari karin illaa laba sano jir! Hadaad eegto sawirkan waxaad arkeysaa Pit Bull iyo Feer, labadaba waxay si dhab ah u muujineysaa Feeryahankeeda dhexdeeda markay faraxsantahay oo ay dabadeeda ruxeyso. Waxay u dhaqaaqdaa dhammaadkeeda dambe dhab ahaantii waa wax lagu qoslo! Iyadu sidoo kale wax badan ayey la mid tahay Feeryahan eyda kale leh iyadu ma ahan qof dagaal badan gabi ahaanba, laakiin iyadu aad ayey uga jilicsan tahay feeryahan ama xitaa inta badan Baararka Dibi. Runtii iyadu waa qurux! Sawirada waxaa iska leh New World Am. Bakhtiga Dulliga Dibi '
Ku garaac isku darka Pull Bull / Boxer markay jiraan 6 bilood
'Kani waa Rude Dog, badiyaa waxaan u naqaan Roo. Waxaan ka helnay koorso golf muddo ku dhow sanad ka hor tan iyo markaasna wuxuu ka koray xishood badan oo xishood badan oo 7 rodol ah oo geesinimo iyo ciyaar ciyaar leh 70-lb ' dhabta eyga '(ama sidaas ayuu u maleynayaa!) Waxaan ku qiyaaseynaa illaa hal sano ama wax ka badan. Waxyaabaha uu adduunka ugu jecel yahay waa dawaynta eyga iyo u taga a soco habeen kasta , gaar ahaan barafka. Aad buu u dhaqan fiican yahay wuxuuna si fiican ugu jawaabaa dadka cusub iyo eeyaha kale ee uu la kulmo wuxuu rabaa inuu saaxiib la noqdo QOF KASTA !! Wuu yaqaan isaga xeerarka iyo xuduudaha laakiin marba marka ka dambaysa wuu iska siqayaa oo laga yaabaa inuu silig calaliyo ama bustahiisa burburiyo, laakiin, haye, haddii uusan kaa xanaajin karin, kuma siin karo indhihiisa eeyaha ee la jecel yahay! Waa kan sariirtiisii ​​oo sugaya daaweyn, waxay qaadatay ugu yaraan 15 daqiiqo si loo helo sawir wanaagsan.
Sarge 13-jirka Bullboxer Pit eey - milkiilihiisa ayaa leh, 'Sarge wuxuu jecel yahay inuu ciyo nce markaa magaca Sarge… wuu qayliyaa amarrada markuu wax doonayo.'
Tango the Bullboxer Pit at 7 years and about 73 pounds - milkiilihiisa ayaa leh, 'Waxaan u maleynayaa inuu sawirkani muujinayo muuqaalka jir ahaaneed ee Bullboxers ay inta badan leeyihiin, inta u dhexeysa ballaca Pit Bull ama Bulldog iyo xariijinta iyo lugaha dhaadheer ee Feerka. Bulloxer kasta oo aan la kulmo wuxuu muujiyaa astaamahan (in kasta oo aan qirey kaliya in yar oo faro ku tiris ah).
Leo the Bullboxer Pit at 4 sano jir
waa maxay adhijir caucasian ah
waa maxay eey daisis ah
spaniel cocker oo lagu qasay eeyo chihuahua
geesaha dibiga oo leh sawirro
sawirada godadka sanka buluuga ah